यी युवा आफ्नो बाईकमा कतै जादै थिए अचानक ह्याण्डलवाट हिस.. हिसको आवाज आईरहेको थियो, के रहेछ भनेर हेर्दा उड्यो होस् ? – Sunaulo Nepal TV
यी युवा आफ्नो बाईकमा कतै जादै थिए अचानक ह्याण्डलवाट हिस.. हिसको आवाज आईरहेको थियो, के रहेछ भनेर हेर्दा उड्यो होस् ?
घर बाट करिब एक किलोमिटर टाढा, जब प्रोफेसर भोंग आफ्नो खेत को काम सकेर घर फर्कदै थिए, उनले बाइक को ह्यान्डल को नजिक एक हिसि आवाज सुने। सुरुमा उनले यो आवाजमा ध्यान दिएनन्, तर जसरी गाडीको गति बढ्यो, त्यति नै आवाज आयो। जब उनले बाइक रोके र ध्यान दिएर हेरे, त्यहाँ ह्याण्डलको नजिक एउटा स र्प बसिरहेको थियो।
Previous ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृ,त्यु, मनमा अलि कति दयामाया छ भनि RIP लेखनुहोस्
Next चोरीको आरोपमा दुई १० वर्षीय बालकहरुलाई मुण्डन गरेपछि दुनियाँभरीका मानिस आक्रोशित